कास्की २ प्रतिनीधि सभा उप–निर्वाचनमा १४ दल सहित २५ जनाको उमेदवारी – Online Annapurna
२१ कार्तिक २०७६, बिहीबार १२:४२ November 7, 2019 174 Views
दीननाथ बराल पोखरा २१, कात्तिक । कास्की क्षेत्र नं.२ प्रतिनीधि सभा उप–निर्वाचनमा कास्कीमा १४ वटा राजनीतिक दल सहित २५ जनाको उमेदवारी परेको छ । आगामी मंसिर १४ गते हुने कास्की उपनिर्वाचनमा ११ वटा स्वतन्त्र सहित २५ जनाको उमेदवारी परेको जिल्ला निर्वाचन अधिकृत महेन्द्रराज सुवेदीले बताए ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कास्कीमा आज विभिन्न बाजा गाजा सहितको हजारौंको जुलुस सहित नेकपा, कागेंस सहितका उमेदवार सहित २५ जनाले आफ्नो उमेदवारी दर्ता गराएका हुन्। कास्की क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा उप–निर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट विद्या भट्टराई, नेपाली कांग्रेसबाट पुराना नेता खेमराज पौडेलले दर्ता गरे । भट्टराईको प्रस्तावकमा नेकपा कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण थापा र समर्थकमा नेकपा नेतृ प्रभा कोइराला रहेकी थिइन्। त्यसै गरी पौडेलको प्रस्तावकमा कागेंस नेता देवराज चालिसे र समर्थकमा कांगेस नेता सोभियत बहादुर अधिकारी रहेका थिए ।
स्व.मन्त्री अधिकारीको जन्मथलोबाट भट्टराईको चुनावी अभियास सुरु
मंसिर १४ गते हुने कास्की क्षेत्र नं. २ को प्रतिनिधि सभा उप–निर्वाचनमा नेकपाको तर्फबाट उम्मेदवार विद्या भट्टराईले आफ्नो निर्वाचन अभियान स्व.मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको जन्मस्थान पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३३ भरतपोखरीबाट शुरू गरेकीछन् । आफ्नो चुनावी अभियान शुरू गर्न भरतपोखरी पुगेकी भट्टराईलाई स्थानियले स्वागत गर्दै उक्त ठाउँका बासिन्दाले रविन्द्रको सपना पुरा गर्न आग्रह गरे ।
यसैबिच, कागेंसले भने शुक्रबारबाट चुनावी अभियान सुरु गर्ने भएको कागेंस कास्कीका सभापति कृष्ण केसीले बताए । उनले भने “ हामीले चुवानी अभियान शुक्रबार देखि सुरु गर्दैछौं, कहाँबाट र कसरी सुरु गर्ने भन्ने बिषयमा गृहकार्य गर्दैछौं ।” त्यस्तै साझा पार्टीले कास्कीमा सवै भन्दा पहिला उमेदवारको घोषणा गरी घर दैलो कार्यक्रममा जुटेको छ ।